Kedu otu esi ekpebi ụdị mmadụ?
Mmetụta dị na nkọwa nke àgwà mmadụ mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ dị mkpa. "N'okwasị ha na-ezute, ha na-elezi uche" - ilu ahụ, ma o kwere omume, na-egosipụta isi ihe dị n'echiche nke onye dị n'ọdịdị ya. Ogologo ihe banyere ụdị mmadụ n'ime nwere ike ịkọ na ọnụ ọgụgụ ya.
O doro anya na nwoke toro ogologo na nwoke mara mma nke nwere obere ụkwụ ga-ele ụwa anya n'ụzọ dị iche, nyochaa ọnọdụ ma mee mkpebi ụfọdụ.
Ọnụ ọgụgụ nke onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ Canada bụ Liz Burbo dugara n'ọgba aghara nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nchọpụta a ma ama. Dika akuko ya si di, dika onu ogugu, i nwere ike ikpebi udidi onye mmadu, egwu ya na ochicho ya, ochicho na omume ya na gburugburu uwa. Site n'aka Bourbaugh, o wepụtara ụdị 5 dị iche iche, nakwa, ya mere, ụdị mmadụ ise, nke nwere traumas ụmụaka (ha na-egosipụta n'ahụ anyị). Ndị mmadụ na-enweghị nsogbu trauma adịghị eme, kama ha (mmerụ ahụ) nwere ike ịbụ ole. N'ihe na-egosi mmetụta nwatakịrị ahụ na-ahụ n'ahụ mmadụ, otú ahụ ka nkà mmụta uche na-enwekwu mmetụta na àgwà ya ugbu a.
N'ezie, ụdị nkwupụta nke ajụjụ a ga-adọrọ mmasị ọtụtụ, mana ọ bara uru ịghọta ya nke ọma, ebe ọ bịara doo anya na enwere ike iji ya mee ihe maka nzube nke onwe ha, iji kwado ndụ na ịdị adị ha, ịmalite ịmekọrịta ihe omume ma mụta ịkọrọ ndị mmadụ na ụwa gburugburu gị.
Akpụkpọ ahụ dị nro, ọkpụkpụ na-emerụ ahụ, anya egwu nke ntakịrị anya, mgbe ụfọdụ, ndị dị otú ahụ yiri ihe na-egbu egbu. Ụdị ndị a adịghị amasị ịdọrọ uche, na ìgwè mmadụ ha na-efu ngwa ngwa ma bụrụ ndị a na-adịghị ahụ anya.
Ụmụaka merụrụ ahụ mgbe ha nọ n'afọ. O yikarịrị ka ha anọghị na-echere ma zubere atụmatụ, afọ ime mere na mberede. Ma, ọ bụrụ na ndị nne na nna edobeghị njikere maka nzọụkwụ dị otú ahụ dị oke mkpa, ọ na-egosi na nwa ahụ adịghị mkpa. Ma, n'ihi ịhụnanya ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ, enweghi imechi ime ime, ma a mụrụ nwa.
Ndị dị otú ahụ amaghị na ha nwere ikike ịdị adị ma ọlị, ha enweghị mmasị n'ihe onwunwe, ha nwere ọgụgụ isi ma nwee ọgụgụ isi, ma ha na-echekarị na ha enweghị isi ma jụ ụwa dum. Ọ dịghị onye na-aghọta ma ọ bụ nabata ha - ha onwe ha na-eche otú ahụ. Ya mere, na-ahọrọkarị ụzọ nke owu ọmụma. Ihe kacha egwu ha bụ ụjọ.
Elongated ahụ dị nro, eriri ụkwụ gbagọrọ agbagọ, ọkpụkpụ na-adọrọ adọrọ na ọdịdị na-enweghị atụ bụ àgwà nke ụdị mmadụ abụọ. Ụdị onye dị otú a bụ obere ihe, ma ọ bụghị ụbụrụ na ike. Anya na-agba anya, na-ele onye ọ bụla anya.
A natara mmerụ ahụ tupu ọ dị afọ 3. Dị ka a na-achị, a na-emerụ ihe mgbochi uche uche na nne na nna nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị. Nke a nwere ike ịbụ enweghị mmetụta uche, dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ndị nne na nna nwere ike ịga ahịa, ọ bụkwa maka nwatakịrị ahụ bụ nsogbu, n'ihi na n'oge ahụ ọ dị mkpa na ya nwere nne na nna.
Ụdị ndị a na-adọta mmasị ndị ọzọ mgbe nile site na ụzọ ọ bụla dịnụ. Ha bụ nkwado dị mkpa, ikere òkè ná ndụ ha, ịhụnanya mmekọahụ, na-agbalịsi ike maka nnwere onwe, na-aghọkarị ndị a ma ama, na ọchịchọ iji gboo mkpa ha ịbụ ebe etiti.
Onye yiri yiri kolobok, nke a na-ahụ anya nke ọma, nwere cheek na-acha uhie uhie, ihu ihu na ọdịdị dị mma na-ezo aka n'ụdị nke atọ.
Nkwupụta okwu ọjọọ na okwu ọjọọ nwatakịrị nọ n'okpuru afọ 5 nwere ike ịkpata trauma uche. Ndị dị otú ahụ na-eme ihere nke onwe ha, nke onye ọ bụla na ihe niile. N'agbanyeghị na ha maara kpọmkwem mkpa ha na ọchịchọ ha, ha na-eleghara ha anya, na-ebute nsogbu ndị ọzọ, gbalịa idozi ha. Ndị dị otú ahụ dị nkọ, na-atụ egwu nnwere onwe.
Ụdị nke anọ.
Ụdị ọnụ ọgụgụ nke pear, akwa hips, obere obere, na-ahụ nke ọma ịmata ọdịiche nke ndị nke ụdị nke anọ.
A nabatara trauma na afọ ise ruo afọ ise n'ihi nne na nna nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya, nke onye ahụ mechuru ihu. Ndị dị otú ahụ na-achịkwa onye ọ bụla na ihe niile, gbalịa ịchịkwa, gbalịa ịmasị ọ bụla ụgwọ. Ha bụ ndị na-atụgharị uche, ọ bụghị ndị na-ahụ maka ọdịmma, na-eme ngwa ngwa ma kpebie. A na-ewu ọtụtụ atụmatụ, nke, dịka iwu, anaghị emezu.
Ụdị nke ise.
Okpuru aru ma mara mma, oke elu, ogo nke oma bu ihe omuma nke uzo ise. Ndị dị otú ahụ nwere àgwà nke na-egbuke egbugbere ọnụ ha, a na-ejikọta mmegharị.
Mgbe ọ dị afọ 6, otu n'ime nne na nna nke nwatakịrị ahụ enweghị ekele maka omume na omume nke nwa ahụ, na mgbakwunye, agbasoro ntaramahụhụ ahụ. Ndị dị otú ahụ na-emekarị ka ha zuo ezu n'omume nile, mgbe ụfọdụ, na-echebara ha echiche, mgbe ụfọdụ oyi na-adịghị. Ha na-achọ iji onwe ha na ndị ọzọ tụnyere, ma ọ bụrụ na nyochaa na ihu ọma ha bụ ezigbo obi ụtọ. Ha na-atụ egwu na a ga-ajụ ha, ndị ọbịa na oyi na nghọtahie.
Kedu otu esi achọpụta ụdị nsị na ọdịdị mbọ?
Kedu ụmụ nwanyị dị ka ụmụ nwoke n'ezie
Kedu ka esi mee ka ndị mmadụ gee gị ntị?
Ọgwụgwọ egwu na nsogbu na homeopathy
5 iwu maka ime ka mmekọrịta dị ike
Kedu otu esi mụta ụzọ isi kwupụta echiche gị n'ụzọ ziri ezi?
Ịbụ ezigbo anụ azụ na ụwa nke oge a
Ejiri achịcha a na-eche maka ya
Rịọ maka enyemaka, ndụmọdụ ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Red ashberry ke ndiife na nkà mmụta ọgwụ
Igbu onwe onye: olee otu esi egbochi ndị na-enweghị ike ịnwụ?
Achịcha na garlic maka tebụl Afọ Ọhụrụ
Omume bara uru na ihe ojoo nke umuaka
Egwuregwu dị ka ụzọ isi gbanwee
Ezigbo SMS-ekele sitere na February 23
Nri Lemon na ude
Achịcha na osisi poppy
Ime ihe ike dị ka ụzọ isi ebi ndụ dị mma
Ụzọ esi amalite ọnwụ: ndụmọdụ nke onye na-edozi ahụ, ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Kedu ka esi hụ ọrụ gị n'anya?
Ememe obi ụtọ nke Ememe Ngabiga
Otu esi achọta nwoke maka mmekọrịta siri ike
Enweghịxia nervosa na ụmụ nwanyị tozuru okè
Kedu otu esi eme ka ịkpụ aka na ntụrụndụ n'ụlọ?
Iwu nke ezigbo uto maka ụmụ nwanyị